सुदूरपश्चिम विकासको काँचुली फेर्ने अभियानमा ‘अपि पावर’
२०७८ चैत २३
दार्चुला (घट्टेगाड) । देशको सुदूरपश्चिमी क्षेत्र लोकतन्त्र आइसक्दा पनि सम्वतः सबैभन्दा पिछडिएको मानिन्छ । राज्यले बाटो–घाटो, सडक, पुल, बिजुली, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि त्यस क्षेत्रका लागि अड्कली अड्कली खर्च गर्ने गरेको छ । यद्यपि, पछिल्लो एक दशक यता त्यस क्षे...
माथिल्लो तामाकोसी कथा, अनिश्चितता चिरेर बलेको दियो
२०७८ चैत ७
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्दा हिजो राज्य, यसका निकाय र प्रबुद्धवर्ग बाँडिएका थिए । विदेशीले गिद्दे दृष्टि लाएका थिए । एउटा जमात यो आयोजना स्वदेशी पैसाले नै निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर अहोरात्र खटिएको थियो । भुइँ मान्छेको भीडदेखि नीति निर्माणको ठेल...
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीकरण सुरु भएको ११० वर्ष पुगेको छ । १९६८ सालमा ५०० किलोवााटको चन्द्रज्योति विद्युत् केन्द्र (फर्पिङ) को निर्माण भएदेखि नै विद्युतीकरण सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै दोस्रो तथा नेपालकै पहिलो जलविद्युत् केन्द्रका रूपमा चन्द्रशम्शेरले निर्माण गराएको उक्त आयोजना बेलायत सरकारको सह...
२०७८ फाल्गुण १२
काठमाडौं । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसक्दा कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा दिने योगदान क्रमशः घट्दो छ । यस क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्नुमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनभन्दा लागत मूल्य बढी हुनु तथा कृषिजन्य उपज...
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूकाे बाटो हुँदै यसको बहस र प्रयोग नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ । पछिल्लो समय देशभित्र यसको प्रयोग विस्तारै गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ ।...
हरित हाइड्रोजन भनेको के हो ? के यसले दक्षिण एसियामा ऊर्जा रूपान्तरण गर्न सक्ला ?
२०७८ माघ २७
हरित हाइड्रोजनले स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावित स्रोतको रुपमा धेरैको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको छ र यसलाई ‘भविष्यको इन्धन’को रुपमा समेत चर्चा गर्ने गरिएको छ । तर, हरित हाइड्रोजन भनेको चाहिँ के हो ? यसलाई किन ‘हरित’ भनिएको हो ? यसको प्रयोग र फाइदाहरु के के हुन् ? निकै सम्भावना बोकेको ऊर्ज...
२०७८ मङ्सिर १२
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरूमार्फत करिब ९० प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा भएको छ । कार्यालयमातहतका १० वटा वितरण केन्द्रले अधिकांश ठाउँमा विद्युतीकरण गरी गुणस्तरीय आपूर्तिमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणका दुई डिभिजन (हेटौंडा र नेपालगन्ज) नेपालगन...
अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा आकर्षक आयोजना ‘माथिल्लो त्रिशूली–१’, जसले राज्यकोषमा ८० अर्ब थप्दै
रसुवा (मैलुङ) । कोरियन सरकारको मुख्य लगानी रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले अहिले गति लिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मा अगाडि बढाइएको आयोजना उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको झन्डै ४ वर्षपछि आजको अवस्थामा पुगेको हो । ९० प्रतिशत कोरियन र १० प्रतिशत नेपा...
प्रसारण लाइन निर्माणको कहर र कोसी कोरिडोरको सफलता
२०७८ भदौ १५
काठमाडौं (रासस) । प्रसारण लाइन निर्माणमा दशकाैं काम गरेका प्राविधिकहरू भन्छन्- हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर एउटा छुट्टै आयोजना हो । समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न जुन खालको मिहिनेत चाहिन्छ, एउटा टावर बनाउन पनि उतिकै जोडबल आवश्यक पर्छ । यही कारण, हाल निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना...
संकटमा लघुजलविद्युत् क्षेत्र, सरकारलाई ‘हाइसन्चाे’ !
काठमाडौं । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुपूर्व साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण भई घरघरमा बिजुलीको उज्यालो पुगेको थियो । पहिले गाउँघरमा पानीघट्ट वा पानीमिलबाट वा सानो कुलोबाट ल्याएको पानी साना टर्बाइनमा खसालेर विद्युत् उत्पादन हुने गर्थ्याे । विस्तारै प्रविधिको विकास र त्यसको व्यापकताका...